Wararka - Suuqa Kala Soo Bixista Dhirta 2021 Si Xawli Ah Ugu Soo Kordhaya Dunida Mustaqbalka Dhow | Falanqaynta Shirkadaha Sare- Martin Bauer, Indena, Euromed, Naturex, Bio-Botanica, iwm.
Warbixin faahfaahsan oo cinwaankeedu yahay, "Suuqa Soo-saarista Dhirta Caalamiga ah" ee dhowaan ay daabacday Warshadaha Kobaca Warshadaha (IGI) waxay bixisaa aragti dhammaystiran oo ku saabsan suuq-geynta dhirta adduunka ee caalamiga ah. Waa warbixin loo dhan yahay oo bixisa macluumaad hufan oo sax ah oo ku saabsan dhinacyada muhiimka ah ee qaybaha muhiimka ah iyo ciyaartoyda suuqa. Warbixintu waxay bixisaa qiimeyn adag oo ku saabsan suuq-geynta dhirta dhirta si loo fahmo baaxadda awoodda koboca, kobaca dakhliga, kala duwanaanta wax soo saarka, iyo qodobo qiimeyn ah oo aan ka aheyn falanqaynta baaxadda suuqa, waxqabadka suuqa, iyo dhaqdhaqaaqa suuqa ee Suuqa Soo-saarista Dhirta. Intaa waxaa sii dheer, warbixinta si qoto dheer ayaa loo qiimeeyay si loo sawiro sawirka guud ee suuqa iyada oo daraasad faahfaahsan oo ku saabsan isbeddelka suuqa ee hadda jira lagu baaro ballaarinta iyo koritaanka suuqa Suuqa Soo-saarista Dhirta inta lagu jiro xilliga saadaasha, 2020-2027.
Warbixintu waxay leedahay cutub gaar ah oo ku saabsan Cudurka faafa ee COVID-19 iyo saameynta ugu weyn ee ay ku leedahay wax soo saarka wax soo saarka iyo adeegyada kale ee la xiriira suuqa. Waxay sidoo kale sameysaa qiimeyn la taaban karo oo ku saabsan saameynta ay yeelan karto COVID-19 socda sanadaha soo socda. Macluumaadkan, warbixintu waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso macaamiisha inay dejiyaan istiraatiijiyad suuq oo wax ku ool ah iyo qorshe maalgashi si ay isbeddel ugu sameeyaan aragtidooda ganacsi. Intaa waxaa dheer, warbixintu waxay daboolaysaa istiraatiijiyado muhiim ah iyo qorshooyin ay qaateen qaar ka mid ah ciyaartoy waaweyn si loo hubiyo joogitaankooda suuqa iyo inay ku sii jiraan tartanka adduunka.
Warbixintan suuqa waxay bixisaa aragti guud oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa iyo aragtida guud iyada oo la siinayo sharaxaad la taaban karo oo ku saabsan darawallada muhiimka ah, xakamaynta, fursadaha, iyo caqabadaha sanadaha soo socda. Waxay sidoo kale bixisaa aragti muhiim ah oo ku saabsan isbeddelka suuqa ee hadda jira iyo waxqabadka la xiriira badeecooyinka kala duwan ee la xiriira suuqa. Waxay sidoo kale muujineysaa aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan qeybaha la filayo inuu si weyn u ballaadho iyo gobolka soo ifbaxaya inuu yahay bartilmaameedka ugu muhiimsan ee suuqyada laga soo saaro dhirta. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa qiimeyn muhiim ah oo ku saabsan muuqaalka tartan ee soo-saareyaasha iyada oo baahida loo qabo Soo-saarista Dhirta la saadaaliyay inay si aad ah ugu sii kordheyso gobollada kala duwan.
Warbixinta, oo ay daabacday Warshadaha Kobaca Warshadaha (IGI), waa macluumaadka ugu saxsan uguna kalsoonida badan iyadoo ay ugu wacan tahay howlaheeda cilmi baaris ee ballaaran ee ay sameeyeen koox heegan ah. Warbixinta waxaa lagu diyaariyey iyadoo la adeegsanayo hanaan cilmi baaris adag oo diiradda saareysa aasaasiga iyo sidoo kale ilaha sare. Warbixinta waxaa la diyaariyey iyadoo lagu tiirsan yahay isha koowaad oo ay ku jiraan wareysiyada shirkadaha fulinta & wakiillada iyo helitaanka dukumiintiyada rasmiga ah, websaydhada, iyo war-saxaafadeedka shirkadaha. Warbixinta kobaca warshadaha (IGI) warbixinteeda waxaa si weyn loogu yaqaanaa saxsanaanta iyo tirooyinka dhabta ah maadaama ay ka kooban tahay matalaad garaaf ah oo kooban, miisas, iyo tirooyin muujinaya sawir cad oo ku saabsan horumarka alaabooyinka iyo waxqabadkooda suuq ee ugu dambeeyay. dhawr sano.
Waxaad sidoo kale u tagi kartaa rukunka sanadlaha ah ee dhammaan cusbooneysiinta suuqa Kala-baxa Dhirta.
Warbixintu waxay ka hadlaysaa waxqabadka faahfaahsan ee qaar ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah iyo falanqaynta ciyaartoyda waaweyn ee warshadaha, qaybaha, dalabka iyo gobollada. Intaa waxaa dheer, warbixinta ayaa sidoo kale tixgelisay siyaasadaha dowladda ee qiimeynta habdhaqanka suuqa si loo muujiyo fursadaha iyo caqabadaha ka iman kara suuqa gobol kasta. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadlaysa heshiisyadii dhowaa ee ay ka mid ahaayeen midaynta & soo iibsiga, iskaashiga ama wax wada qabsiga iyo horumaradii ugu dambeeyay ee soo saarayaasha si loogu sii wado tartanka caalamiga ah ee suuqa dhirta laga soo saaro dhirta.
Marka loo eego qiyaasta aragtida kobaca warshadaha (IGI), suuqyada caalamiga ah ee laga soo saaro dhirta waxaa lagu qiimeeyay UDS XX million waxaana la saadaalinayaa inay gaaraan qiimaha USD XX million dhamaadka 2027, iyadoo lagu balaarinayo CAGR of XX% ilaa saadaasha. muddo. Warbixintu waxay soo koobeysaa waxqabadka dhirta laga soo saaray gobollada, Waqooyiga Ameerika, Latin America, Yurub, Aasiya Baasifigga, iyo Bariga Dhexe & Afrika iyadoo diiradda la saarayo qaar ka mid ah waddamada muhiimka ah ee gobollada. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, warbixintan waa la habeyn karaa oo laga heli karaa warbixin gaar ah oo loogu talagalay gobolka iyo waddamada gaarka ah.
Soosaarida xididka Ginseng, Marigold Extract Lutein, Soosaarida Tribulus Terrestris, Soosaarida Shaaha Oolong, Bromelain, Soosaarida Thymus Vulgaris,